KU SAABSAN DHALANYARONIMO IYO XAAMILONIMO
Kani oo eh buuga waxbarashada tiirmud Amethea waxay idin ku soo dhawayney waxbarashada iyo ra’yi oo ku saabsan dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro iyo rabnaan. Goosheena ugu horeyso waxaa waye ka hortaga uur aad ku talagalin.
Waxaa jecelnahay in aan caawino dhalanyarta iney isku qabaan kalsooni xaga bulshada iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhexeenkaro.Waxaan u malayneynaa sida ugu fiican oo taasi loo sameyenkaro waxay tahay in oo la keeno mawdooc wadahadal ah fasalka dhexdiisa, meesha dhalanyarta iskugu imaadan iyo asxaabta guduhooda. Markaas dhalanyarta waxey aqoon u lahaan karaan dereemahooda iyo xuduudaha ee leedahay, iyo sida ee u qaadi la’haayen mas’uuliyad oo ku saabsan ka hortaga uured.
Kooxda Amathea waxaa waaye gudi oo ku yaalo wadanka oo dhan, oo bixiyaan (waano) ku saabsan dhalanyarta, dumarka iyo nin iyo naag isqabaan oo heleen uur oo ku talagalin.
Goosheena waxaa waaye in aan caawino naagaha uurka leh oo ey dareemaan in ey heestaan doorasho fiican. Taasoo eh hadal iyo warbixin oo qofka xaamilaha eh ka dooran karo dooqayaala kala duwan. Sida ee ku gaaraan go’aan ee ku noolaan karaan.
Kooxada Amathea waxey sameeyaan shaqo oo ku saabsan ka hor tagi taanka uur qaadis, waxbarasho oo ku saabsan sida taasi looga hortagi lahay, ku soo qaado tusaalo, iskoolka. Waxa oo kale bixiyaan warbixin oo eh sida looga digtoonaado uur, waxaan qeebinaa kondom iyo waan dumarka siinaa baaritan oo eh in ey xaamilo yihiin.
Ka aqriso waxyaabe kale kooxda Amathea www.amathea.no
Bookga waxbarashada “go’aan adag” waxaa sameyeen gudiga Amathea iyo waxey oo kale ula shaqeeyeen Helse og Rehablitering
UJEEDDO IYO XAGA ISTICMAALKA
Qalabkaan waxaa loo soo jeediyey in oo la siiyo cuskaasho iyo fikrado cusub oo qorsheenta iyo falka waxbarashada oo ku saabsan damaca, oo xooga la saaraayo in laga hortago uur.
Qalabkaan waxbarashada waxaa isticmaalaan hogaamiyaasha-Amathea, kalkaalisooinka caafimaadka guud, macallin ama mid kale oo haasto shahaado. Waxaa oo kale loo maleenaa in loo isticmaali sanadki ugu debeeyey waxbarashada oo ka mideh dugsiga dhexe iyo sanaddka koowaad ee dugsiga sare. Waxaa kale loo isticmaalaa ururka dhanyarta iyo goobta kale dhalanyarta joogaan.
Anaga waxaa rabnaan leheen iyadoo loo maraayo jidka wadahadlid in ee ka helaan dhalanyarta jawaabtooda meel xiiso leh iyo ey ku tartamaan. Qalabkaan waxoo siinaa dhalanyarta boos banaan fikrado ku saabsan damaca, oo logu soo dhaweenaayo wadahadlid. Goosha waxaa waaye wadahadal.
Qalabqaabin Iyo Aqoonta Warbixnnta:
Anne Nygård, hogaamiyaha mashruuca iyo qoraa buugashaqada.
Eva Ch. Nilsen, filin samaynta iyo qoraa buugashaqada.
Ravn Lanesskog, qoraalaha masraxa filinka.
Solveig Melkeraaen,sameeyaha filinka.
Kaja Vik, sawir /masawir sameyta buugashaqada.
Ka Soo Goday Amathea:
Hildegunn Bomnes, agaasime.
Målfrid Bergaplass, qoys hogaamiye.
Tove Merethe Lorentzen, kalkaaliso caafimaad guud/hogaamiye.
Mary Anita Kjøndahl, kalkaaliso caafimaad/hogaamiye.
Ka Imaadey Norsk Interaktiv AS:
Randulf Roaldsnes,mas’uulka qiimaha.
Edvard Brygfjeld (Brygfjeld Interaktiv)
Charlotte Andersen (tiirmud Amathea)
Falsimidaan waxaa la sameyeen Helse og Rehabilitering.
Noocaayaha badan ee loo isticmaalo:
Buuga waxbarasahada noocyaal badan ayaa loo isticmaali karaa. Anaga waxaa dalbanay wadahadlid oo tuseeyso dhibaatooyinka xaga uurka aad ku talagalin ki imaadaan.
Dood kasto waxey kula taliney hal ama waxbadan oo ka imaada filinka oo ka mid eh soojeedin oo ku socoto su’aalo iyo wadahadlid. Teeda kale waxaa loo sii diraa xaqiida iyo (teori) sida indinka u isticmaashiin waxbarashadiina. DVD-ga wuxuu haystaa filin yaashaan ka heleesiin waxyaalaha aad kala dooran kartiin marka koow web saaydka.
Qorsheyntaan waxey idin siiney fikrado cusub iyo tiir aad ku tiirsatiin sidaas darteed in aad la qabsatiin mid ka mid eh hogaamidaan iyo dhacdadaas loogu talagalay koox go’an.
Isticmaalka buuga waxbarashada:
Filinka ”Go’aan adag ” – waxa dhamaantiis loo fiirsan karaa, in aad soo download gareesid iyo waxaad u fiirasan kartaa baab baab, sida oo kale baabka 1-waad “uur?
Qalab dheeraad – dhalanyarada ka imaadeen Nordland waxey ka jabaabaayaan suaalo
Buuga shaqeynta oo hogaamiya – waxaa ku helikartaa asagoo eh PDF
Baalasha buugaa waxaa loo sameyey si u haboon in koobi looga qaado iyo si loo qeebiyo. Kheyraadka internettka waxuu dhisaa buuga khafiifka ah iyo warbixin, laakin wax yar ayoo ka duwanyahay dhismahiisa iyo waxuu leeyahay joogto warbixin cusub.
Su’aalo ku saabsan fikiraad iyo wadahadal sidaan ayoo u calaamad sanyaha:
Kheyraadka internettka waxuu u dhisanyahay sida oo kale buuga shaqeynta. Kheyraadka internetka waxa kale uu hestaa laylis ama shaqo fudud aad ka shaqeyesid, isla markaas waxa kale uu hastaa fikrado waaweyn aad ka shaqeysid oo loo isticmaalo fasalka dhexdiisa ama koox gudohood. Kheyraadka internetka gudohood waxaa macqool ah in aad ka shaqeysid cashirka asagoo dhan marka ugu horeeso in aad ka soo bilaabtid meesha ugu sareeysa oo aad soo wada martid sida baab baabka iskugu xigxigo aad sii wadid linkiga ugu hooseeyo bog kasto uu ku yaalo baabka. Ama waxaa dalban kartaa baabka ugu fudud aad jeceshahay in aad xooga saartid.
Daad badan ayaa ilmo iska soo ridaan oo aan ka hadlin. Dareemaha raga iyo dumarka ka dhexeenkaro iyo uur aan ku talagalin waxaa waaye wax xanuun badan iyo wax laga hadlin. Markii oo hadal kan meesha yimaado waxaa muhiim eh in oo hogaamiyaha dhiso meel amaano iyo meel furfurunaad sameyneyso in ey dhalanyarta isoo dhaxgelaan oo ey isla qeybsadaan fikradahooda.
Meeshaan waxaa loo isticmaali karaa habab badan, tusaal ahaan:
Waydii suaal furfuran
Isbadal oo dhaco flinka kabacdi, tusaalo:
– Maxaa isku imaanayo markii aad maqashid ereyyaha uur aad ku talagalin?
Waxaad qoran kartaa qoraal xasuus ah. Labo iyo labo ayaa fikradahiina isla qeybsan kartiin eray xasuus/khariidaad fikrado ah.
Wiilasha iyo gabdhaha waxaa loo qeybinaa hawlo ka wadahadlaayaan kaligood.
Dhalanyarta waxaa la siinayaa shaqo ey ka soo bixinaayaan internetka runta. Ayaga waxey isla shaqeyn karaan koox koox oo ey soo bandhigaayaan runta. Mawduuca muhiimka waxuu noqon karaa lambarka ilmo iska soo rideenka, sharciga oo ku sabsan ilmo iska soo ridida, ka hortaga uurka, marka ugu horeeyso aad u galmooneysid iyo dhaqankasto meesha oo ka taaganyahay fikradaha oo ku saabsan dereemaha iyo ilmo iska soo rideenka.
Dhalanyarta waxey ka sheekeenaayaan xaalad ey hubin sida ey u sameyn lahaayeen.
Tusaalooyinkaan wexey isku kenee, sida caadiga sabuurada, iyo hal mawduuc oo loo samaynaayo masrax. Dhalanyarta waxaa la siinaa wax ey jilaan iyo wax ey ka keenayaan xalad jirto. Wax yar kadib waa la joojin jilitaanka ey wadeen markaas hogaamiyaha wuxuu weydiinayaa qof kale in oo ahaayo nooc kale oo loo xalin karo xaaladaas. Hadoo qof kale haayo nooc kale oo loo xalin karo xaalada meesha oo qof kaas fadhiyo ayoo ka sheegayaa mise waxuu imaan karaa “masraxa” oo ka tusi karaa. Kani waa lugu soo celin karaa. Sidaas deraadeed dhalanyarta waxey heli karaan noocyo badan ee ey ku xalin karaan xaalad adag, iyo ayagoo markaas kadib haastaan baaraandagi weeyn.
Khatar laga dhigeenin
Intii ayaga iska hadli lahaayeen, dhalanyarta waa la dhiiringilinaa si ey u hadlaan wax ey hada ka hor maqleen, fikradaha ey ka haastaan dadka kale see u fikiraan iyo wax la mid eh. Sidaas daraadeed wadahadalka waxaa ka yaraanaayo shaqsi gaar ah iyo “khatar”. Filinka iyo waxa kale dheeraadka uu heesto waxa kale ayoo dhiibaa kabilaabid fiican laga wadahadli karo “ dadka kale”. Si’walba qalabka qofkasto dooratid, waxaa muhiim ah in la qasbin dhalanyarta.Waa in ey dareemaan texgelin marka ee la imaadan ra’yigooda. Hadii aad rabin in aad laqeeybsatit ra’ygigaaga, sidaaneh way fiican tahay.
Habka loo sameynaayo
Anaga waxaa marka ugu horeeso ku billaabeenaa halkamar aad waxbaraneesid waxaa waaye labo saacadood:
Filinka oo la dhameestiranaayo.
Isbadal oo dhaco flinka kabacdi iyo fikradaha filinka kadib.
Doorosho aad ku taqasuseysit – waxaa daareysaa filinka qeybta aad rabtid oo ka mid eh mawduuca aa doorati iyo isticmaalka ugu horeeyso dooda, howl koox ah, masraxaha, mise fikrad shaqsi ah.
Faa’iido weyn ayaa ku jirto in oo hogaamiyaha dabagalo 1 – 2 bilood kabacdi.
Kani waxaa waaye waxbarasho oo waqti badan u baahan si aad u fahamtid.
Wax yar oo ka kooban filinka «Go’aan adag »
Ugu horeenta filinka waxaa la kulmeynaa qofka filinka wado Thea. Ayada waxey jirtaa 15 waxeyna ka cabsaneysaa in ey uur leedahay. Waxey iska qaadeysaa tijaabo uur. Natiijada waxey tusaa in ey leedahay uur.
Waxey isku deyee in ey hooyadeed la hadasho, laakin ma’isku furfuri karto hooyadeed. Thea waxey u sheegey saaxiibteet xaalada ey ku jirto, iyo saaxiibteet waa ka nexeysaa. Waxeyna ka wadahadlaayaan in ey u suuro galeeyso in ey ilmaha iska soo rido ama in eey heeysato ilmaha. Thea waxey ogeeysiiney Fredrik (15), oo eh cunuga aabehiis, waxii dhaceen SMS gudihiisa. Fredrik aqbaarta waxoo la qeybsanaa saaxiibkiis Kamran, Kamran waa ka yaabay. Asaga waxuu u maleynaa in ey sidaas caadi ey tahey Fredrik iyo Thea in ey heystaan cunugooda. Qeebta filinka ugu danbeeso Thea iyo Fredrik waxey isla kulmaayaan beerta. Waxey isla qeebsanaayan fikradahooda iyo dareemahooda, go’aana kuma gaaraayaan waxa ey sameyn doonaan. Fredrik waa ka xunyaha in oo ka bixin Karin hadal oo ku saabsan in ey uurka ey heysato mise in ey iska soo rido. Filinka waxuu ku dhamaanaayaa khatin la’aan.
Filinka waxuu soconaayaa 17 daqiiqo camal.